Ilay andro nahitako Testamenta Vaovao
"Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin’Andriamanitra, Izay nampihavana antsika taminy amin’ny alalan’i Kristy." 2 Korintiana 5:17,18
“Teraka tany Matamores, any Mexique, aho, 42 taona lasa izay. Nahazo izay nilaiko aho fony tanora, ary avy eo dia nianatra tao amin’ny oniversiten’i Mexico. Tao aho dia niditra tamin’ny fanaovana pôlitika. Avo fijery aho, naniry ho mpitsara na mpisolo vava. Nitombo hatrany ny fahombiazako teo amin’ny asa, ka nanokatra varavarana maro ho ahy, ary … tsy ela aho dia tafalatsaka tao anaty tontolon’ny heloka bevava. Tampoka teo dia tapaka ny fisondrotako teo amin’ny asa. Nandositra aho matoa tsy voasambotry ny pôlisy, ka voatery nandao ny taniko. Rehefa tafaverina tany Mexique aho, taona vitsivitsy tat? aoriana, dia voasambotra.
Vita hatreo ny fiainako, hoy aho anakampo. Kanjo indray andro aho dia nahita Testamenta Vaovao, tao anaty fanariam-pakon’ny fonja. Gaga dia gaga aho, namaky azy. Toa nahita jiro nanazava ny fiainako aho. Izany hazavana izany dia nahatonga ahy hahatsapa ny fahadisoako, kanefa koa nanokatra fanantenana ho ahy. Indray andro aho dia nandohalika, nangataka tamin’Andriamanitra hamela ny heloko. Dia fiadanam-po tsy nampoizina, mbola tsy tsapako hatrizay, no nanolo ilay zioga mavesatra nentiko.
Tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy no nandraisako fiainana vaovao tanteraka. Nony afaka aho, fotoana fohy tat? aoriana, dia niverina tany amin’ny fianakaviako. Tsy nandà ahy izy ireo, na teo aza ny fahoriana nampitondraiko azy. Ary tao anatin’ny volana vitsivitsy nanaraka izany, dia nanjary nino ny Tompo Jesosy avokoa ny fianakaviako manontolo. Fiainam-baovao ho anay mianakavy izany. Ary izany rehetra izany dia nanomboka tamin’ilay andro nahitako Testamenta Vaovao tany am-ponja.”